Fandaharana & Serivisy - BullyingCanada
Fandaharana & Serivisy
/ Fandaharana & Serivisy
BullyingCanada namorona tambajotra fanohanana 365 andro isan-taona, 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro izay manolotra fanampiana hanova ny fiainan'ny tanora amin'ny alalan'ny telefaona, chat an-tserasera, mailaka ary SMS.
Ity serivisy fanohanana ity dia tsy manan-tsahala any Canada - mihoatra lavitra noho ny torohevitra tsy mitonona anarana mahazatra atolotry ny fikambanana mpanao asa soa hafa.
Miaraka amin'ny ekipa iray misy mpilatsaka an-tsitrapo an-jatony manerana an'i Kanada miasa tsy sasatra avy any an-tranony, BullyingCanada manome fanohanana sy fandraisana an-tanana mba hisorohana sy hampitsaharana ny fampijaliana. Ny mpirotsaka an-tsitrapo dia voaofana amin'ny torohevitra, fisorohana ny famonoan-tena, fanelanelanana ary famahana olana. Ireo mahery fo ireo mamantatra olana ary hamaha azy ireo– fampitsaharana ny fampijaliana sy fisorohana ny fiverenany.
Manao izany izy ireo amin’ny alalan’ny fifampiresahana lalina amin’ny tanora sy ny fianakaviany; ny mpampijaly sy ny ray aman-dreniny; mpampianatra, mpanolotsaina mpitari-dalana, talen-tsekoly ary mpiasan'ny biraon'ny sekoly; asa sosialy eo an-toerana; ary, raha ilaina, ny polisy eo an-toerana. Ny tanjonay farany dia ny hampitsahatra ny trauma izay niainan'ireo ankizy nampijaliana, ary hahazo ny fanaraha-maso matetika ilaina mba hanasitranana.
ny mahazatra, BullyingCanada dia mijanona ho mavitrika mandritra ny roa na telo herinandro, fa ny toe-javatra sarotra kokoa dia mila fanohanana mandritra ny volana na herintaona na mihoatra mba hamahana. Tsy milavo lefona izahay raha tsy efa voaaro sy afaka mandroso amin'ny hoavy mamiratra ny ankizy ampijaliana.
Mamorona saina misokatra sy miaro ny ankizy
Ho fanampin'ny fanomezana ny sekoly sy ny fikambanan'ny vondrom-piarahamonina afisy manohitra ny fampijaliana, bokikely ary fitaovam-pampianarana hafa, BullyingCanada, eo ambany fitarihan'i Rob Benn-Frenette, ONB, dia manome atrikasa ho an'ny vondrona amin'ny habe rehetra ihany koa.
Ireo atrikasa ireo dia manome hery ny tanora sy ny mpitarika ny vondrom-piarahamonina mba hiadiana amin'ny fomba mahomby amin'ny fampijaliana ary hanome fomba vaovao ho azy ireo hamahana ireo olana atrehin'izy ireo mandritra ny androm-piainany.
Programme Scholarship nasionaly
Fanomezana hery ny Mpitarika Tanora
Natomboka tamin'ny taona 2013 ny Fandaharan'asan'ny Fanabeazam-pirenena mba hamerenana ny tanora, miaraka amin'ireo olona mety ho voatendrin'ny mpiasan'ny sekoly. BullyingCanada dia manaiky ny filàna mamboly mpitarika vondrom-piarahamonina mafana fo, ary namolavola programam-pirenena momba ny vatsim-pianarana mba hanomezana fanampiana ho an'ny fianarana ambaratonga faharoa.
Ireo vatsim-pianarana ireo dia manome hery ireo tanora izay lasa mpitarika ny vondrom-piarahamonina miatrika ny fampijaliana any an-tsekoly.
Tsy misy zaza tavela any aoriany
Hatramin'ny 2006, BullyingCanada efa an'ny firenena mandeha fikambanana rehefa tonga amin'ny ezaka hiadiana amin'ny fampijaliana. Eny tokoa, mijanona ho hany fikambanana mpanao asa soa nasionaly izahay izay miara-miasa amin'ny tanora Kanadiana, ny fianakaviany ary ny vondrom-piarahamonina misy azy ireo, manome fanohanana, loharano, ary fampahalalana maharitra maharitra mba hisorohana ny herisetra amin'ny fampijaliana sy hiarovana ny zanatsika.
Mirehareha amin'ny fanomezana fanohanana ilainy ireo ankizy marefo ilainy izahay, manitatra ny fandaharantsika hisorohana ny herisetra ary hiantohana ny fiarovana ny zanatsika.
BullyingCanada miasa tsy an-kijanona amin'ny fisoloan-tena amin'ny anaran'ireo tanora niharan'ny fampijaliana manerana ny firenena—manorina hoavy mamirapiratra sy ara-drariny kokoa ho an'ireo tanora iharan'ny herisetra sy ny fiarahamoniny.
Inona no atao hoe fampijaliana?
Betsaka ny ankizy mahafantatra tsara ny atao hoe fampijaliana satria hitany isan'andro izany! Mitranga ny fampijaliana rehefa misy olona manafintohina na mampatahotra olona iray fanahy iniana ary sarotra ny miaro tena ilay olona ampijaliana. Noho izany, mila mandray anjara ny rehetra hanampy amin’ny fampitsaharana izany.
Diso ny fampijaliana! Ny fitondran-tena no mahatonga ilay olona ampijaliana hatahotra na tsy mahazo aina. Maro ny fomba fampijaliana ny tanora na dia tsy fantany aza izany amin’izany fotoana izany.
Ny sasany amin'izany dia:
Mandoto totohondry, manosika ary zavatra hafa mandratra ara-batana ny olona
Manaparitaka tsaho ratsy momba ny olona
Mitazona olona sasany tsy ho ao anatin'ny vondrona iray
Maneso olona amin'ny fomba ratsy
Mitadiava olona sasany "hiditra" amin'ny hafa
Inona avy ireo karazana fampijaliana mahazatra?
Fametavetana am-bava – fiantsoana anarana, fanesoana, fanesoana, fanaparitahana tsaho, fandrahonana, fanaovana filazana ratsy momba ny kolontsaina, foko, firazanana, fivavahana, lahy sy vavy, na fironana ara-pananahana, fanehoan-kevitra ara-nofo tsy ilaina.
Fanalam-baraka ara-tsosialy - fanararaotana, fanalam-baraka, fanilihana ny hafa amin'ny vondrona, fanalana baraka ny hafa amin'ny fihetsika ampahibemaso na graffiti natao hanambany ny hafa.
Fampijaliana ara-batana - mamely, mandefitra, manindrona, manenjika, manosika, manery, manimba na mangalatra entana, fikasihana ara-nofo tsy ilaina.
Cyber ​​Bullying - mampiasa Internet na hafatra an-tsoratra mba hampitahorana, hanimba, hanely tsaho na haneso olona.
Inona avy ny sasany amin'ireo voka-dratsin'ny fampijaliana?
Mampikorontana ny olona ny fampijaliana. Mety hahatonga ny ankizy hahatsiaro ho manirery sy tsy faly ary matahotra. Mety hahatonga azy ireo hahatsapa ho tsy azo antoka izany ary hieritreritra fa tsy maintsy misy zavatra tsy mety aminy. Mety tsy hatoky tena ny ankizy ary mety tsy te hianatra intsony. Mety harary mihitsy aza izany.
Misy mihevitra fa ny fampijaliana dia ampahany fotsiny amin'ny fihalehibeazana ary fomba iray ahafahan'ny tanora mianatra mifikitra amin'ny tenany. Mety hisy vokany maharitra ara-batana sy ara-tsaina anefa ny fampijaliana. Anisan'izany ny:
Fialan-tsasatra amin'ny hetsika ataon'ny fianakaviana sy ny sekoly, maniry ny hijanona irery.
Tsy afaka matory
Matory be loatra
Raha tsy ajanona ny fampijaliana dia mandratra ny olona eo akaikiny, ary koa ny olona mampijaly ny hafa. Matahotra ireo mpitazana fa sao izy ireo no ho tra-doza manaraka. Na dia malahelo an’ilay olona iharan’ny herisetra aza izy ireo, dia misoroka ny fidiran’izy ireo mba hiarovana ny tenany na satria tsy azony izay tokony hatao.
Ny ankizy izay mianatra fa afaka miala amin'ny herisetra sy ny herisetra dia manohy manao izany amin'ny olon-dehibe. Manana vintana ambony kokoa izy ireo hiditra amin'ny herisetra mampiaraka, fanorisorenana ara-nofo ary fitondran-tena heloka bevava any aoriana any.
Mety hisy fiantraikany amin'ny fianarana ny fampijaliana
Ny adin-tsaina sy ny tebiteby ateraky ny fampijaliana sy ny fanorisorenana dia mety hanasarotra kokoa ny fianarana ny ankizy. Mety hiteraka fahasarotana amin'ny fifantohana izany ary hampihena ny fahafahany mifantoka, izay misy fiantraikany amin'ny fahaizany mitadidy ny zavatra nianarany.
Mety hiteraka olana lehibe kokoa ny fampijaliana
Mampahory sy mahamenatra ny fampijaliana, ary mahatsiaro ho menatra sy voadaroka ary menatra ny ankizy ampijaliana. Raha tsy mitsahatra ny fanaintainana, ny fampijaliana dia mety hitarika amin'ny fiheverana ny famonoan-tena na ny fihetsika mahery setra.
Inona no fahita matetika ny fampijaliana?
Any Kanada, dia tanora 1 amin’ny 3, fara fahakeliny, no nitatitra fa nisy nampijaly. Efa ho ny antsasaky ny ray aman-dreny any Kanada no nitatitra fa manana zanaka iharan'ny fampijaliana. Ny fandinihana dia nahita fa ny fampijaliana dia mitranga indray mandeha isaky ny fito minitra eo amin'ny kianja filalaovana ary indray mandeha isaky ny 25 minitra ao an-dakilasy.
Amin'ny ankamaroan'ny tranga, mijanona ao anatin'ny 10 segondra ny fampijaliana rehefa miditra an-tsehatra ny mpiara-mianatra, na tsy manohana ny fihetsika mampijaly.
Inona no azoko atao amin'izao fotoana izao momba ny fampijaliana eo amin'ny fiaraha-monina misy ahy?
Voalohany, tadidio fa eto izahay ho anao 24/7/365. Mi-chat aminay mivantana, andefaso an mailaka, na omeo peratra izahay amin'ny 1-877-352-4497.
Izany hoe, ireto misy hetsika mivaingana vitsivitsy azonao atao:
Ho an'ny niharam-boina:
Lazao amin'ny olona itokianao - mpampianatra, mpanazatra, mpanolo-tsaina mpitari-dalana, ray aman-dreny
Lazao zavatra midera ilay mpampijaly mba hanelingelina azy
Mijanòna ao anaty vondrona mba hisorohana ny fifandonana
Mampiasà vazivazy hanalana na hifandraisana amin'ny mpampijaly anao
Ataovy hoe tsy misy fiantraikany aminao ilay mpampijaly
Ampahatsiahivo hatrany fa olona tsara ianao ary mendrika ny hajaina
Ho an'ny mpitazana:
Aza atao tsinontsinona ny trangan-javatra mampijaly, fa andramo:
Lazao amin'ny mpampianatra, mpanazatra na mpanolotsaina
Mandrosoa na eo akaikin'ilay niharam-boina
Ampiasao ny feonao - lazao hoe "ajanony"
Minamana amin’ilay niharam-boina
Tariho hiala amin'ilay toe-javatra ilay niharam-boina
Ho an'ny mpampijaly:
Miresaha amin’ny mpampianatra na mpanolotsaina iray
Eritrereto izay ho tsapanao raha misy mampijaly anao
Diniho ny fihetseham-pon'ny niharam-boinao – mieritrereta alohan'ny hanaovanao zavatra
Inona avy ireo antontan'isa manan-danja tokony ho fantatra momba ny fampijaliana?
Kanada no manana taha faha-9 ambony indrindra amin'ny fampijaliana amin'ny sokajy 13 taona amin'ny ambaratongan'ny firenena 35. 
Mpianatra tanora 1 amin’ny 3, fara fahakeliny, any Kanada no nitatitra fa nisy nampijaliana vao haingana. 
Eo amin'ireo Kanadiana efa lehibe, 38% amin'ny lehilahy sy 30% amin'ny vehivavy no nitatitra fa niaina fampijaliana tsindraindray na matetika nandritra ny taom-pianarana. 
Ny 47% amin'ny ray aman-dreny kanadianina dia mitatitra fa manana zanaka niharan'ny fampijaliana. 
Ny fandraisana anjara rehetra amin'ny fampijaliana dia mampitombo ny mety hisian'ny hevitra hamono tena amin'ny tanora. 
Ny tahan'ny fanavakavahana niainan'ireo mpianatra izay mitonona ho Lesbienne, Gay, Bisexual, Trans-identified, Two-Spirited, Queer or Questioning (LGBTQ) dia avo telo heny noho ny tanora heterosexual. 
Ny ankizivavy dia azo ampijaliana kokoa amin'ny Internet noho ny ankizilahy. 
7% amin'ireo olon-dehibe mpampiasa aterineto any Kanada, 18 taona no ho miakatra, no nilaza tena fa niharan'ny fampijaliana an-tserasera tamin'ny fotoana iray teo amin'ny fiainany. 
Ny endrika mahazatra indrindra amin'ny fampijaliana an-tserasera dia ny fandraisana mailaka na hafatra avy hatrany mandrahona na mahery setra, notaterin'ny 73%-n'ireo niharam-boina. 
Ny 40%-n'ny mpiasa Kanadiana dia miaina fampijaliana isan-kerinandro. 
Filankevitra Kanadiana momba ny fianarana - Fampijaliana any Canada: Ny fiantraikan'ny fampitahorana amin'ny fianarana
Molcho M., Craig W., Due P., Pickett W., Harel-fisch Y., Overpeck, M., ary HBSC Bullying Writing Group. Fironan'ny fotoana iraisam-pirenena amin'ny fitondran-tena fampijaliana 1994-2006: fikarohana avy any Eoropa sy Amerika Avaratra. Gazety iraisam-pirenena momba ny fahasalamam-bahoaka. 2009, 54 (S2): 225-234
Kim YS, ary leventhal B. Fampijaliana sy famonoan-tena. Famerenana. Gazety iraisam-pirenena momba ny fitsaboana sy ny fahasalamana ho an'ny tanora. 2008, 20 (2): 133-154
Bully Free Alberta - Fampijaliana homophobic
Statistics Canada - Fampijaliana an-tserasera sy fitaomana ankizy sy tanora
Statistics Canada - Famonoan-tena amin'ny Internet any Canada
Lee RT, ary Brotheridge CM "Rehefa mivadika ho mpiremby ny remby: ny fampijaliana any amin'ny toeram-piasana ho mpamantatra ny fanoherana / fampijaliana, fiatrehana ary fahasalamana". Gazety Eoropeana momba ny asa sy ny psikolojia momba ny fandaminana. 2006, 00 (0): 1-26
Inona avy ireo angano mahazatra momba ny fampijaliana?
Hevi-diso #1 - "Tsy maintsy mianatra mijoro ho an'ny tenany ny ankizy."
Ny zava-misy – Ireo ankizy izay sahy mitaraina noho ny fampijaliana dia milaza fa niezaka izy ireo ary tsy afaka miatrika irery ny toe-javatra. Raiso ho toy ny antso vonjy ny fitarainany. Ho fanampin'ny fanolorana fanohanana, dia mety hanampy ny fanomezana ny ankizy amin'ny famahana olana sy ny fanofanana amin'ny fanamafisana mba hanampiana azy ireo amin'ny fiatrehana toe-javatra sarotra.
Hevi-diso #2 - "Tokony hamely ny ankizy - mafy kokoa."
Reality - Mety hiteraka fahavoazana lehibe izany. Ny olona manenjika matetika dia lehibe kokoa sy mahery kokoa noho ireo niharam-boina. Izany koa dia manome ny ankizy ny hevitra fa ny herisetra dia fomba ara-dalàna hamahana olana. Mianatra mampijaly ny ankizy amin'ny fijerena ny olon-dehibe mampiasa ny heriny amin'ny herisetra. Ny olon-dehibe dia manana fahafahana haneho ohatra tsara amin’ny fampianarana ny ankizy ny fomba famahana olana amin’ny fampiasana ny heriny amin’ny fomba mety.
Hevi-diso #3 - "Manangana toetra."
Ny zava-misy - Ireo ankizy izay iharan'ny herisetra imbetsaka, manana fiheveran-tena ambany ary tsy matoky ny hafa. Manimba ny fiheveran'ny olona iray ny fampijaliana.
Hevi-diso #4 - "Ny hazo sy ny vato dia afaka manapaka ny taolanao fa ny teny dia tsy manimba anao velively."
Ny zava-misy - Mety haharitra mandritra ny androm-piainany ny takaitra navelan'ny fiantsoana anarana.
Hevi-diso #5 – “Tsy fampijaliana izany. Mananihany fotsiny izy ireo.
Ny zava-misy - Mampahory ny fanesoana feno herisetra ary tokony hajanona.
Hevi-diso #6 - "Nisy foana ny mpampijaly ary hisy foana."
Ny zava-misy - Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny maha-ray aman-dreny sy mpampianatra ary mpianatra antsika dia manana hery hanova zavatra sy hamorona hoavy tsara kokoa ho an'ny zanatsika isika. Amin'ny maha-manampahaizana manokana azy, Shelley Hymel, dia nilaza hoe: "Mila firenena iray manontolo ny manova kolontsaina". Andao hiara-hiasa hanova ny toe-tsaina momba ny fampijaliana. Raha ny marina, ny fampijaliana dia tsy olana amin'ny fifehezana - fotoana fampianarana izany.
Hevi-diso #7 - "Ho zaza ny ankizy."
Ny zava-misy - Ny fampijaliana dia fitondran-tena nianarana. Ny ankizy dia mety maka tahaka ny fihetsika mahery setra hitany tamin’ny fahitalavitra, na filma na tao an-trano. Ny fikarohana dia mampiseho fa ny 93% amin'ny lalao video dia manome valisoa amin'ny fihetsika feno herisetra. Ny fikarohana fanampiny dia mampiseho fa ny 25% amin'ny ankizilahy 12 ka hatramin'ny 17 taona dia mitsidika tsy tapaka ny tranokala gore sy mankahala ny Internet, saingy nampihena ny fahitan'ireo zazalahy ny herisetra sy ny herisetra nataony tao amin'ny kianja filalaovana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ny media. Zava-dehibe ho an'ny olon-dehibe ny miresaka momba ny herisetra amin'ny haino aman-jery miaraka amin'ny tanora, mba hahafahan'izy ireo mianatra ny fomba hitazonana izany amin'ny teny manodidina. Ilaina ny mifantoka amin'ny fanovana toe-tsaina manoloana ny herisetra.
Source: Governemanta Alberta
Ahoana no ahafahako manolo-tena?
Raha liana amin'ny asa an-tsitrapo miaraka amin'ny BullyingCanada, afaka mianatra bebe kokoa amin'ny anay ianao Mandraisa anjara ary Tongava mpilatsaka an-tsitrapo pejy.
Mitady olona mafana fo, mazoto ary manolo-tena mandrakariva izahay mba hanampy anay hanakana ireo tanora marefo tsy ho voahetraketraka.